CHROME မှာဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့: ဂရုတစိုက်, အတုက်ဘ်ဆိုက် - CHROME ကို GOOGLE - 2019
အတုက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားအကြောင်းကို Google က Chrome ၏သတိပေးဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
တချို့က Microsoft Word ကိုအသုံးပြုသူများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေကြ - ပရင်တာစာရွက်စာတမ်းများပုံနှိပ်မပေးပါဘူး။ ဒါဟာပရင်တာဘာမှ print ထုတ်မရမူအရလျှင်တဦးတည်းအရာပါပဲ, သည်, ရှိသမျှအစီအစဉ်များမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါဟာပြဿနာကိုတိကျစွာအဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်တည်ရှိသည်ကြောင်းရှင်းပါတယ်။ အတော်လေးအခြားကိစ္စအဆိုပါပုံနှိပ် function ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်သာအနည်းငယ်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူတွေ့ရှိရသော, သာနှုတ်ကပတ်တော်၌အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်မပါဘူးဆိုရင်။
နှုတ်ကပတ်တော်၌ပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ troubleshooting ပြဿနာများ
အကြောင်းပြချက်ပြဿနာများ၏ဇစ်မြစ်မှာရပ်နေကြသည်မဟုတ်မည်သို့ပင်, ပရင်တာစာရွက်စာတမ်းများပုံနှိပ်ပါဘူး, ဒီဆောင်းပါးအတွက်ကျွန်တော်သူတို့တစ်ဦးစီနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်ပြောပြနှင့်မည်သို့ဤပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နေဆဲလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများထွက် print ထုတ်ရန်။
အကြောင်းပြချက် 1: စိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောအသုံးပြုသူ
ကိုယ့်အမှားတစ်ခုခုလုပ်နေတာဟာအစပြု၏ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုအမြဲစရာရှိသောကြောင့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်, အတွေ့အကြုံကို PC အသုံးပြုသူများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ငါတို့သည်သင်မှန်ကလုပ်နေလုပ်နေကြောင်းသေချာစေရန်သင်ကအကြံပြု, သင်ကထွက်တွက်ဆကူညီဖို့အတွက် Microsoft ကနေအယ်ဒီတာအတွက်စာနယ်ဇင်းပေါ်မှာငါတို့ဆောင်းပါး။
အကြောင်းမရှိ 2: ကိရိယာများ၏မသင့်လျော်ဆက်သွယ်မှု
ဒါဟာပရင်တာစနစ်တကျချိတ်ဆက်မကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီအဆင့်မှာကပရင်တာကနေအထွက် / input ကိုအဖြစ် cable ရဲ့အားလုံးကို double-စစ်ဆေးလျက်, ထွက်ပေါက် / အဆိုပါ PC ကိုမှဝင်ပေါက်သို့မဟုတ် Laptop ကိုမှာဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ရဲ့ပညာအတတ်မရှိဘဲတစ်စုံတစ်ဦးကပိတ်ထား, ပရင်တာမှာအားလုံးဖွင့်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ရန်လွဲဖြစ်မနေပါနဲ့။
ဟုတ်ကဲ့အဲဒီထောက်ခံချက်များအများဆုံးရယ်စရာနှင့် trite ထင်ရပေမယ့်ငါ့ကိုယုံကြည်စေခြင်းငှါ, အလေ့အကျင့်အတွက်များစွာသော "ပြဿနာများ" ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတိမဲ့သို့မဟုတ်အလျင်တဆောအသုံးပြုသူများ၏ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက် 3: ကိရိယာများစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ပြဿနာများ
နှုတ်ကပတ်တော်၌ပုံနှိပ်အပိုင်းဖွင့်လှစ်သင်မှန်ကန်တဲ့ပရင်တာကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြကြောင်းသေချာအောင်သင့်ပါတယ်။ သင်၏ desktop စက်ပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ Software ကိုပေါ် မူတည်. ပြတင်းပေါက်အတွက်ပရင်တာကို select အများအပြား devices များဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်တဦးတည်းပေမယ့်အားလုံး (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ကို virtual ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Control Panel ထဲက" - မီနူးကနေ select လုပ်ပါ "Start" (Windows XP ကို ​​- 7) သို့မဟုတ်ကလစ် Win + X ကို နှင့်စာရင်း (- 10 ကို Windows 8) အတွက်ကို item ကိုရွေးချယ်ပါ။
, စာရင်းထဲကတစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပရင်တာကိုရှာဖွေညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှင့်အတူကပေါ် click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "ပုံမှန် Make".
အခုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသွားနှင့်စာရွက်စာတမ်းပုံနှိပ်ခံရဖို့ဖြစ်စေလျက်, တည်းဖြတ်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
မီနူးကိုဖွင့် "File" နှင့်ကိုသွား "Information" ဆိုတဲ့;
"ကာကွယ်ပါစာရွက်စာတမ်း" ပေါ်တွင် Click နဲ့ select လုပ်ပါ "တည်းဖြတ်ခြင်း Enable".
မှတ်ချက်: စာရွက်စာတမ်းတည်းဖြတ်များအတွက်ပြီးသားပွင့်လင်းသည်ဆိုပါက, သင်သည်ဤအကြောင်းအရာသည်ကိုကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။
စာရွက်စာတမ်း print ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဂုဏ်ပြုလွှာ, ဒါပေမယ့်လျှင်မ - - ဒါဟာထွက်လှည့်လျှင်နောက်တစ်ဆင့်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
အကြောင်းပြချက် 4: တိကျတဲ့စာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူအဆိုပါပြဿနာ
အတော်လေးမကြာခဏနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာရွက်စာတမ်းများကြောင့်သူတို့ပျက်စီးသို့မဟုတ်ယိုယွင်းဒေတာ (ဂရပ်ဖစ်, ဖောင့်) ဆံ့ပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုမှမဖွစျနိုငျ, ချင်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲမထားဘူး။ ဒါဟာသင်အောက်ပါခြယ်လှယ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်, အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုကွိုးစားအားထုရန်မလိုပါပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းဖို့တာဖြစ်နိုင်တယ်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Start အသစ်တစ်ခုစာရွက်စာတမ်းဖန်တီးပါ။
စာရွက်စာတမ်း၏ပထမလိုင်း Enter « = Rand (10) " အဆိုပါကိုးကားနှင့်စာနယ်ဇင်းမပါဘဲ « ENTER ».
စာသားစာရွက်စာတမ်းကျပန်းစာသားကို 10 အပိုဒ်ဖန်တီးလိမ့်မည်။
စာရွက်စာတမ်း print ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
စာရွက်စာတမ်းစမ်းသပ်မှုများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအဘို့, ပုံနှိပ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပြဿနာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မည်ဆိုလျှင်, သင်, ဖောင့်ကိုပြောင်းလဲစာမျက်နှာအပေါ်အချို့သောအရာဝတ္ထုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ထို့နောက်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း print ထုတ်ကြိုးစားပါ။
စာရွက်စာတမ်းများပုံနှိပ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနိုင်လျှင်အချိန်တန်သောအထက်ပါမှဖော်ပြထားထိန်းသိမ်းရေးတွေ့နိုင်ပါသည်။ ပုံနှိပ်ပြဿနာများကြောင့်တချို့စာလုံးတွေအံ့သောငှါထစခွေငျးငှါ, ဒါကြောင့်သူတို့သည်သင့်ကိုပြောင်းလဲရန်လမ်းကိုဒီဒါရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးစမ်းသပ်စာသားကိုစာရွက်စာတမ်း print ထုတ်ပါလိမ့်မယ်လျှင်, ပြဿနာဖိုင်ကိုသူ့ဟာသူအတွက်ဝှက်ထားခဲ့သည်။ သငျသညျ print ထုတ်နှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းထဲသို့ paste, အဲဒီနောက်ပုံနှိပ်အလုပ်မပို့နိုင်သည့်, ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဲ့ contents ကူးယူဖို့ကြိုးစားပါ။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်, ဒီကကူညီလိမ့်မည်။
သငျသညျပုံနှိပ်အတွက်သူ့ကိုလိုအပ်တယ်စာရွက်စာတမ်း, ဆဲက print ထုတ်မပါဘူးဆိုရင်, အဲဒါကိုပျက်စီးကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်ဖြစ်ပြီး, တိကျတဲ့ဖိုင်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခြားဖိုင်ကနေပုံနှိပ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လျှင်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဒါခေါ်ရောဂါလက္ခဏာများဖိုင်များကိုသာကောင်းစွာအချို့သောကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ပေါ်လာပေမည်စာပို့ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကို။
သင်ခန်းစာ: မသိမ်းရသေးသောစကားလုံးစာရွက်စာတမ်း recover လုပ်နည်း
အကြောင်းပြချက် 5: က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌ပြတ်ရွေ့
ဤဆောင်းပါး၏အစအဦးတွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်, ပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအချို့သောပြဿနာများသာ Microsoft Word ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အခြားသူများကတော်တော်များများ (သို့သော်အားလုံးမဟုတ်) တွင်, ဒါမှမဟုတ်အမှန်ပင်သင့်ရဲ့ PC မှာ install လုပ်ပြီးသားအပေါငျးတို့သအစီအစဉ်များမှာရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သမ်မာကမျြးစာရွက်စာတမ်းများပုံနှိပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိနားလည်ရန်ကြိုးစားပါကပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းဆော့ဖ်ဝဲသူ့ဟာသူတည်ရှိသည်ရှိမရှိနားလည်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
စံသိမ်းထားခဲ့တဲ့အယ်ဒီတာထံမှဥပမာ, အခြားမည်သည့်အစီအစဉ်မှတစ်ဦးပုံနှိပ်အလုပ်ပေးပို့ခြင်းကြိုးစားပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်, သင် print ထုတ်မရနိုငျသောဖိုင်တစ်ဖိုင်၏အစီအစဉ်ကို contents တွေကိုများ၏ window ကိုထည့်သွင်း, ပရင်တာကပေးပို့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းရိုက်နှိပ်လျှင်, သင်ပြဿနာနှုတ်ကပတ်တော်၌တည်ရှိ၏ထို့ကြောင့်နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်သည်ဟုမြင်လိမ့်မည်။ စာရွက်စာတမ်း print ထုတ်နှင့်အခြားပရိုဂရမ်ထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်, သင်ဆဲလာမည့်ခြေလှမ်းများကိုသွားပါ။
အကြောင်းပြချက် 6: နောက်ခံပုံနှိပ်ခြင်း
menu ကိုသွားပါ "File" ပွင့်လင်းအပိုင်း "Options ကို".
အဆိုပါပရိုဂရမ် settings မှာတော့သွားပါ "အဆင့်မြင့်".
ရှိရာအပိုင်း Locate "ပုံနှိပ်ပါ" နှင့် Uncheck "နောက်ခံပုံနှိပ်ခြင်း" (ဟုတ်ပါတယ်, မရရှိနိုင်ပါရှိလျှင်) ။
အကြောင်းပြချက် 7: မှားယွင်းနေယာဉ်မောင်း
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပရင်တာစာရွက်စာတမ်းများပုံနှိပ်မပေးနိုင်သည့်အပေါ်ပြဿနာကိုမချိတ်ဆက်တည်ရှိသည်နှင့်ပရင်တာမဟုတ်ရပ်ကွက်ရဲ့ setting များကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အထက်ပါနည်းလမ်းများအပေါငျးတို့သငျသညျအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် MFP ပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းများ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မကူညီခဲ့ဘူး။ ပျက်ကွက်လျှင်သူတို့ကနေ့စွဲထဲကမမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စတွင်၌သင်တို့ကိုပရင်တာလုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သော software ကို reinstall လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုအောက်ပါနည်းလမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်:
ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူကို bundle လာမယ့် disk ကို drive ကို, Install,
ယင်းကို install လည်ပတ်မှုစနစ်၏ဗားရှင်းနှင့်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုညွှန်း, ကိရိယာကသင်၏အထူးသဖြင့်မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရာတွင်, ထုတ်လုပ်သူ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကနေကားမောင်းသူ download လုပ်ပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲ reinstall, သင့်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ, ပွင့်လင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြီးစာရွက်စာတမ်း print ထုတ်ကြိုးစားပါ။ အသေးစိတ်အဆက်အသွယ်ပုံနှိပ်ကိရိယာများများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း The-install ဆုံးဖြတ်ချက်သီးခြားဆောငျးပါးတှငျဆှေးနှေးခဲ့သညျ။ ဒါကြောင့်နှင့်အလားအလာပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်သေချာစေရန်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ။
Read more: ပရင်တာဒရိုင်ဘာကိုရှာပါနဲ့ install
အကြောင်းပြချက် 8: access ကိုအခွင့်အရေးများမရှိခြင်း (Windows 10)
Microsoft Word ကိုပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူပြဿနာများ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း windose ဖြစ်ပျက်မှုမလုံလောက်သောအသုံးပြုသူအခွင့်အရေးများစနစ်ဖြင့်စေသော, ဒါမှမဟုတ်သီးခြား directory နှင့် ပတ်သက်. ၎င်းကင်းမဲ့စေနိုင်သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့ကရယူနိုင်ပါတယ်:
ကအစောပိုင်းကပြုသောအမှုမခံခဲ့ရပါလျှင်, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအခွင့်ထူးနှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုသုံးပြီး operating system ကိုမှဝင်ပါ။
Read more: မှာ Windows 10 မှာ Administrator လုပ်ပိုင်ခွင့်ရယူခြင်း
လမ်းကြောင်း Followကို C: Windows ကို(ထို operating system ကိုအခြား drive ပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးပါက, ဒီလိပ်စာမှစာကိုပြောင်းလဲရန်) နှင့်ရှိ folder ကိုရှာတွေ့ "Temp".
ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကို (ယွမ်) နှင့်အတူကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ဖြတ်လမ်း menu ကနေ select လုပ်ပါ "Properties ကို".
အဆိုပါပေးတဲ့ dialog box ကိုမှာ tab ကိုမှ navigate "လုံခြုံရေး"။ အသုံးပြုသူရဲ့နာမညျကိုအာရုံစိုက်, စာရင်းကိုရှာ "အုပ်စုသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအမည်များကို" သငျသညျ Microsoft Word ကိုအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများပုံနှိပ်ချင်ထားတဲ့မှတစ်ဆင့်အကောင့်။ ဒါကြောင့်ကို Select လုပ်ပါနှင့် button ကို click "ပြောင်းလဲခြင်း".
အခြားပေးတဲ့ dialog box ကိုပုံပေါ်နှင့်တွေ့နှင့်ပရိုဂရမ်အကောင့်များတွင်အသုံးပြုခွဲထုတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပေသည်။ အဆိုပါ parameter သည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု "အုပ်စုဘို့ခွင့်ပြုချက်များ"ကော်လံ "Allow"လာမယ့်အဲဒီမှာတင်ဆက်အားလုံးအချက်တွေကိုမှ checkbox ကိုတစ်ဦးကို tick သတ်မှတ်မည်။
ပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ရန်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Apply" နှင့် "အိုကေ" (အချို့ကိစ္စများတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်အပြောင်းအလဲများနောက်ထပ်အတည်ပြုချက်ကိုလိုအပ်သည် "Yes" ကို pop-up window ကို « Windows ကိုလုံခြုံရေး "), သင်နှင့်ယခင်အဆင့်ပျောက်ဆုံးနေခွင့်ပြုချက်ပေးအပ်ထားတဲ့အဘို့, ပြီးတော့တူညီတဲ့အကောင့်ထဲမှာအခွင့်အာဏာသေချာပါစေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို Reboot ။
Microsoft Word ကို Start နှင့်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း print ထုတ်ကြိုးစားပါ။
ဖိုင်တွေနဲ့ပရိုဂရမ် settings ရပ်ကွက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း
ပုံနှိပ်ပြဿနာတွေတဦးတည်းသီးခြားစာရွက်စာတမ်းမှကန့်သတ်မထားလျှင်အမှု၌, ယာဉ်မောင်းပြန်လည်လာသောအခါပြဿနာများတစ်ယောက်တည်းနှုတ်ကပတ်တော်၌ပျေါပေါကျလာသောအခါသူကအလုပ်လုပ်တယ်လျှင်, သင်စစ်ဆေးသင့်မကူညီခဲ့ဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျ default settings ကိုအတူ program ကို run ဖို့ကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ သငျသညျကို manually တန်ဖိုးများကို reset နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကအထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများအတွက်, အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်စဉ်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
default settings ကို restore ဖို့ utility ကို Download လုပ်ပါ
အဆိုပါ link ကိုအလိုအလျှောက်ပါ (registry ကိုအတွက်သမ်မာကမျြး settings ကို reset) restore ပြန်များအတွက် tool ကိုအထက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာမစိုးရိမ်ပါယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ဒီတော့ Microsoft ကတီထွင်ခဲ့သည်။
ဒေါင်း installer ကိုအတူ folder ကိုဖွင့်ပြီးပါက run ။
(ကအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာထိုးထွင်းသိမြင်ဖြစ်ပါတယ်) ကို installation wizard ကိုလိုက်နာပါ။
လုပ်ငန်းစဉ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခု၏နိဂုံးမှာအလိုအလျှောက်ဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မည်, ရပ်ကွက်ကို default တန်ဖိုးများပြန်လည်သတ်မှတ်မှုဖြစ်လိမ့်မည် parameters ။
မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှ utility ကိုအဆိုပါပြဿနာ registry key ကိုဖယ်ရှားပေးကတည်းကမှန်ကန်သော partition ကိုသငျသညျရပ်ကွက်ဖွင် ့. re-နေသူများကဖန်တီးလာမယ့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုစာရွက်စာတမ်းပုံနှိပ်ကြိုးစားပါ။
Microsoft Word ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို Restore
အထက်ပါနည်းလမ်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်မပါဘူးဆိုရင်, သငျသညျပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်၏အခြားနည်းလမ်းကိုကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ function ကို run "ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် Repair"ဒါက (ရှိပါက၏သင်တန်း) ပျက်စီးပြီသောသူတို့အစီအစဉ်ကိုဖိုင်တွေရှာ re-install လုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ကစံ tool ကို run ဖို့လိုအပ် "Programs ကို Add သို့မဟုတ် Remove" သို့မဟုတ် "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ"ယင်း OS ကို၏ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. ။
သမ်မာကမျြး 2010 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား
Microsoft Word ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
"ဖွင့်ပါControl Panel ကို " နှင့်အပိုင်းကိုရှာဖွေ "Programs ကို Add သို့မဟုတ် Remove" (သင်ရှိပါက Windows XP ကို ​​- 7) သို့မဟုတ်ကလစ် « Win + X ကို» နှင့်ကို select "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ" (Windows ကိုဗားရှင်းမှာတော့) ။
အစီအစဉ်များ၏စာရင်းထဲမှာ, ရှာတွေ့ microsoft Office သို့မဟုတ်သီးခြားစီ စကားလုံး (သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ software ကိုဗားရှင်းပေါ် မူတည်. ) နှင့်ပေါ်မှာကလစ်လုပ်ပါ။
ထိပ်မှာလျင်မြန်စွာ Access ကို Toolbar ကိုအပေါ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြောင်းလဲခြင်း".
ကို Select လုပ်ပါ "Restore" ကလစ်နှိပ်, ( "ရုံး»သို့မဟုတ်«ပျောက်ဆုံးသွားသောသမ်မာကမျြး»နောက်တဖန်, ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. Restore) "Restore" ( "Continue"), ပြီးတော့ "Next ကို".
နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည် 2007 ခုနှစ်
ပွင့်လင်းတရားစကားတော်သည်လျင်မြန်စွာ Access ကို toolbar ကို button ကို click «က MS Office ကို» နှင့်ကိုသွား "Options ကိုနှုတ်မြွက်တော်».
ရှေးခယျြစရာကိုရွေးချယ်ပါ "အရင်းအမြစ်" နှင့် "ရှာဖွေရေး".
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အကူအညီ" နှင့်ကို select "ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် Repair".
သတိပေးခံရတဲ့အခါမှာကလစ်နှိပ်ပါပြီးရင်, Microsoft Office ကို installation ကို disc ကိုထည့်သွင်း "အိုကေ".
အထက်ပါ-ဖော်ပြထားကိုင်တွယ်ပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်မပါဘူးဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူရှိသည်သောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည် - ထို operating system ကိုသူ့ဟာသူထဲမှာရှာဖွေပါ။
optional: Windows တွင်ဖြေရှင်းရာမှာ
တခါတရံက MS Word ရဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်ကြောင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်ပျက်ဒါငါတို့သည်အချို့သောယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကိုတားဆီး, ပုံနှိပ်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အစီအစဉ်ကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်စနစ်၏မှတ်ဉာဏ်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့, သင်ကို Safe Mode တွင် Windows ကိုစတင်ပါ။
ကွန်ပျူတာ optical drives တွေကိုနှင့် flash drive ကိုထဲကမှသာကီးဘုတ်နဲ့မောက်စ်ထွက်ခွာ, မလိုအပ်သောပစ္စည်းတွေကို turn off ။
တစ်ဦးစတင်မှုကိုကိုင်စဉ်အတွင်း « F8 » (တိုက်ရိုက် switching ပြီးနောက်ကတည်းက Motherboard ကထုတ်လုပ်သူရဲ့လိုဂို on ရဲ့ထွန်းကားပုံပေါ်) ။
သငျသညျရှိရာအပိုင်းအဖြူရောင်စာသား, အတူအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် "အဆင့်မြင့် Boot ကို Options ကို" သငျသညျကို select ရန်လိုအပ်ပါတယ် "ကို Safe Mode ကို" (Scroll ရွေးရန်မြှားသော့သုံးပြီးစာနယ်ဇင်း « ENTER »).
အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်ပေါ် Log ။
အခုတော့ကို Safe Mode ကိုပွင့်လင်းနှုတ်ကပတ်တော်၌ကွန်ပျူတာ start ကတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း print ထုတ်ကြိုးစားပါ။ ပုံနှိပ်ပြဿနာပေါ်ပေါက်မပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်ပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းဟာ operating system ထဲမှာတည်ရှိသည်။ အကျိုးဆက်ကဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင် (သင် OS ကိုတစ် backup လုပ်ထားမိတ္တူရှိသည်ယူဆ) စနစ်တစ်ခုပြန်လည်နာလန်ထူကြိုးစားနိုင်ပါ။ မကြာသေးမီကသည်အထိ, သင်ပုံမှန်အတိုင်းဒီပရင်တာကို အသုံးပြု. နှုတ်ကပတ်တော်၌စာရွက်စာတမ်းများပုံနှိပ်လျှင်, ပြဿနာအတိအကျပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွား။
မျှော်လင့်ဤဆောင်းပါးကိုသင်ပိုမိုနှုတ်ကပတ်တော်၌ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်နှင့်သင်ဆဲမတိုင်မီဖော်ပြထားအပေါငျးတို့သနည်းလမ်းများကြိုးစားခဲ့တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း print ထုတ်နိုင်ကြသည်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကကမ်းလှမ်းရွေးချယ်စရာအဘယ်သူအားမျှကူညီပေးခဲ့သည်ကြပြီမဟုတ်သငျသညျလျှင်, ငါတို့သည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်တစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်မီနည်းပညာရှင်ကိုဆက်သွယ်ကြောင်းအကြံပြုပါသည်။